IBALI LEMPUMELELO LE-100 LEEPONTI | IMPUMELELO | UTHINTELO - UKUPHULUKANA NOBUNZIMA AMABALI EMPUMELELO
Ungalahla njani iiponti ezili-100
Eyona / Ukuphulukana Nobunzima Amabali Empumelelo
Ukuphulukana Nobunzima Amabali Empumelelo
Kwiminyaka, uJenny Jahn-Hudec, oneminyaka engama-36 ubudala, wayedlula kwiintsuku zakhe ezinzima njengomongikazi ephefumla kwaye eneentlungu. Ukufika kwakhe kwiipawundi ezingama-268, uJenny waqonda ukuba lixesha lokuba enze utshintsho — eli lixesha elilungileyo. Eli libali lakhe.
Andinakuze ndibulibale obo busuku basehlotyeni esibhedlele, kwiminyaka emi-2 eyadlulayo. Bendikwi shift yasebusuku kwaye bendihleli nje kuzo zonke izigulana zam ixesha lokulala. Ndathi ndakuhlala phantsi ndisebenza ngeetshathi zam, umqolo neenyawo zam zaziba buhlungu, kwaye ndandiphelelwa ngumoya ngokungathi bendisandula ukubaleka ndiye eholweni… kuphela bendingenawo. Ukuphefumla kwahlala nam kangangemizuzu engama-45, kwaye intliziyo yam yabetheka ngakumbi nangakumbi esifubeni. Umzimba wam wawuthwele iiponti ezininzi kakhulu, kwaye wawudiniwe. Ukuthetha okuncinci, ukuziva ngale ndlela bendisoyika. Ndazi ukuba ndandityebile, kwaye ndinembali yam yesifo seswekile sokukhulelwa kunye nokukhulelwa kwam kwiminyaka eyi-2 ngaphambili, oogqirha bam bathi yayingengombandela ukuba Ndingaba nesifo seswekile, kodwa nini . Ndafunga ngoko nangoko ukuba ndizimisele malunga ukunciphisa umzimba .
Ndithi 'yiba serious' kuba, njengabafazi abaninzi abalwa nobunzima, bendikhe ndaphantsi kobunzima emzimbeni ngaphambili. Ndizamile abaLindi beTyhefu amaxesha ambalwa ngempumelelo ethile, kodwa into ihlala ifika endleleni kwaye yandiphazamisa. Okokuqala, yayisiya kwikholeji, eyandinyanzela ukuba nditye ukutya okukhawulezayo, okungabizi kakhulu, okungaze kube sempilweni. Kwabe kukumitha kwam kokuqala. Oko kumitha kwaphela ngokuzalwa komntwana oswelekileyo kunye nokuswelekelwa ngumntwana wam wokuqala, ngoko ke ndachitha unyaka olandelayo ndibuhlungu, nto leyo eya isiba nobunzima ngakumbi. Emva koko ndakhulelwa kwakhona — intombi yam, nonyana wam, emva kweminyaka emi-5. Ngalo lonke olu tshintsho, iinkqubo zokulahleka kwesisindo ziluhlobo nje lwesilayidi esiqhelekileyo, kwaye iiponti zibuyele umva.
Ngalo lonke elixesha, ndandisebenza njengomongikazi, ndisenza iishifti ezinde, maxa wambi ixesha lasebusuku. Ndabona izigulana ezitshayayo nezisela kakhulu, ndazixelela ukuba ndiyaphila kuba andizukuhlukumeza nenye yazo. Kodwa ndandikusebenzisa kakubi ukutya. (Nazi iingcebiso ezi-4 zokulwa umlutha wakho wokutya.) Kwaye ekugqibeleni ndandikulungele ukutshintsha, ngeli xesha lokuhamba ixesha elide.
Ngosuku olulandelayo emva koloyiko, ndagqiba kwelokuba ndiqale ngokujonga kuphela kwindlela enditya ngayo, ngelo xesha eyayiquka ipitsa, isonka, iilekese, ukutya okukhawulezayo kunye nepasta — iitoni zecarb kunye nokutya okuthuthuzelayo. Bendizimase iintlanganiso zabaGadi besisindo kwaye ndibala amanqaku ngokwenkolo. Ndijolise ekunqandeni ukutya okucociweyo kunye nokuphekiweyo kunye nokufaka endaweni esempilweni kwiiresiphi endizonwabileyo. Ndafaka i-lettuce endaweni yeetortilla xa ndenza i-tacos, ndaye ndazenzela ii-noodle zam zucchini zokutya endaweni yepasta. . Ukujongana nokutya okusempilweni kunye neshedyuli yomsebenzi wam ophambeneyo, ndacwangcisa kwangaphambili, ndilungiselela kwaye ndenza iqabaza ukutya okusempilweni ngeentsuku zam zokuphumla endinokuzikhupha ngokulula kunye nemicrowave xa ndifika ekhaya.
Ngokutyhalwa ngumhlobo, iinyanga ezi-3 emva kokutshintsha ukutya kwam, ndongeze umthambo, ngakumbi imizuzu engama-30 kaJillian Michaels DVD. Ngethuba lokuqala xa ndizama ukuzilolonga, ndandibuhlungu kangangokuba ndandingakwazi nokuhamba iveki. Kodwa ndiyenzile kwakhona, emva kweentsuku ezimbalwa kamva, kwakhona. Ndandisoyika ukuyenza, kodwa kancinci kodwa ngokuqinisekileyo, kwaba lula kwaye ndaziva ndisiba namandla. Kwaye iiponti zaziza kuvela. Ndiye ndaya kwimizuzu engama-45. Andiphelelanga nje ekunciphiseni umzimba, ndandiziva ndisiya ndomelela — ndandinamandla kakhulu kunangaphambili. (Ufuna ukungena kwimilo kodwa ungabinalo ixesha lokuzilolonga? Jonga Uthintelo entsha Ukulingana kwi-10 IDVD ; igcwele ngeyona ndlela isebenzayo Ukusebenza kwemizuzu eli-10 ungayenza kwigumbi lakho lokuhlala.)
Emva koko, umhlobo ofanayo wandiguqula ndaya kwiDVD yokuzilolonga wandazisa kwiqela labasetyhini lokuphakamisa ubunzima. Iqela lahlangana kwindawo encinci, yabucala yokuzivocavoca emva kweeyure, eyenza ukuba izive ikhethekile kwaye yoyikisa. Ndandisoyika kakhulu ngobusuku bokuqala ndaya, kodwa kwakamsinya nje ndakuba ndibona zonke iintlobo ezahlukeneyo zabasetyhini kunye nenqanaba labo lokuqina, ndakhululeka. Wonke umntu wayexhasana, kwaye ndinomhlobo olungileyo apho owayesebenza ecaleni kwam.
Elo qela yayiyeyona nto yotshintsho olukhulu. Ndifunde ukwenza iiseti kunye nokunyusa ngokuthe chu ubungakanani besisindo endisiphakamisileyo. Ndiyayithanda! Ndisoloko ndi-tomboy, kwaye ukuphakamisa ubunzima kwakundikhuthaza kuba ndandiziva ndiluhlobo olubi lwe-esile. Ndiyakuthanda nokuba ndibone ukuphucuka kubungakanani bobunzima endinokuphakamisa kunye nenani leeseti endinokuzenza veki nganye. Kwakunokulinganiswa, okukhuthazayo kwaye kuyaqhubeka nokundikhuthaza.
Ndabona kwangoko ukutsiba kobunzima bam emva kokuba ndongeze amandla oqeqesho. Njengoko ndisebenza, ndaphakamisa iiponti ezingaphezulu, kwaye ndahlala ndigxile kwisicwangciso sam sokutya, iiponti zanyibilika emzimbeni wam. Ukusukela ngobo busuku ndisesibhedlele kwiminyaka emi-2 eyadlulayo, ndiphulukene neeponti ezili-100! Namhlanje, endaweni yokuzabalaza ukuphakamisa izigulana kwaye ndidlule kumhla wam oxakekileyo, ndinguye omnye abongikazi abiza xa bedinga uncedo ngento enzima ngokwasemzimbeni. 'Tsalela umnikazi womzimba!' bathi.
Emsebenzini, ndiziva ngathi ndibeka umzekelo ongcono kakhulu kwizigulana zam kunangaphambili. Ngoku xa abantu bebona amakhonkco am omtshato kumnwe wam ophakathi kwaye bandibuze ukuba kutheni, ndiziva ndilungile kubaxelela kungenxa yokuba ndilahlekelwe ziiponti ezili-100. Banomdla, kwaye kubanika ithemba xa kufikwa kwizinto ezinokwenzeka kubo.
Xa ndicinga ngokuncipha kwam, ngamanye amaxesha ndicinga ngento eyenze ukuba lo mzamo wokulahleka kwesisindo ubambelele. Kwixa elidlulileyo, bendihlala ndizigxeka, ndigxile kwizinto endingazenzi kakuhle. Ngeli xesha, ndaqala ukubhiyozela impumelelo yam encinci yemihla ngemihla. Ndabona ukuba andifanelanga ukuba ndigqibelele yonke imihla; into ebalulekileyo kukuba ndizamile ukwenza ngcono kunakwizolo. Bendinobubele kum ngeli xesha.
Kwaye kuyahlekisa. Xa ndiqala uhambo lwam lokunciphisa umzimba, injongo yam yayikukuba yintombazana ebhityileyo kwiimagazini. Kodwa emva kokuthandana nomzimba owomeleleyo, andikhathali kangako ngokuba ndibhityile kwaye ngakumbi malunga nokuba sempilweni nokuba womelele. Ndizama nokukhuthaza abanye ngeFacebook [ Ukuphulukana noJenny ] kunye ne-Instagram [ @lungelo_lukalo ].
Ngokweyona njongo yam iphambili, ndiye ndafumanisa ukuba xa kuziwa ekunciphiseni ubunzima, akukho mgca wokugqibela. Ukuhlala usempilweni kwaye ulungile luhlanga oluhlala ubomi bakho bonke, kwaye ndiceba ukuqhubeka nokubaleka.
I-1111 ibhayibhile enentsingiselo
I-333 ithetha ukubhula ngamanani
olona nyikiso lunesondlo ukunciphisa umzimba
Ukutya okutshintshisayo kukunciphisa ukutshitshiswa kwesisindo
Yintoni ebangela iirges kwiinzipho zakho